Madaxweynihii hore ee Masar Ee Sida Dimuquraadiyada Loosoo Doortay Mohamed Mursi oo cuntada ka soomay – STAR FM SOMALIA
Madaxweynihii hore ee Masar Ee Sida Dimuquraadiyada Loosoo Doortay Mohamed Mursi oo cuntada ka soomay
Madaxweynihii hore ee dalka Masar Mohamed Morsi oo xabsiga ku jira tan iyo markii la afgambiyay sanadkii 2013 ayaa la sheegay in uu diiday inuu cuntada isagoo u cabsaday naftiisa.
Iyadoo maanta ay dib u bilaabatay dhagaysiga dacwadiisa ayaa madaxweynihii la afgambiyay uu sheegay in cunto la siiyay 21kii iyo 22kii bishii July ay ahayd mid dambi weyn loogaga galay. Mursi ayaa ka codsaday maxkamada in dhakhtar loo geeyo isagoo sheegay in uu dhibaato ku qabo heerka sokorta jirkiisa oo aad hoos ugu dhacayso.
Sidoo kale Mohamed Morsi ayaa sheegay in uu doonayo in uu la kulmo qareenada u doodaysa isagoo xusay in uu doonayo in uu kala hadlo shan arrimood oo halis ku ah naftiisa oo uu kala kulmay xabsiga. Osama Morsi, oo ah wiil uu dhalay Mohamed Morsi ayaa sheegay in uu tuhunsan yahay in aabihii cuntada wax loogu daray taasina ay dhibaato ku keentay.
Maxkamada la soo taagay maanta Morsi ayaa ah mid dib loogu bilaabayo eedo loo haysto oo ah in sir ay leedahay dowlada Masar uu u gudbiyay wadanka Qadar. Iyadoo dacwadan sidoo kale loo haysto toban ruux oo Masaari ah .
Morsi ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Masar bishii June 2012 sanad kadib markii laga tuuray xukunka madaxweynihii mudada dheer xukumayay Masar ee Xusni Mubarak kadib markii banaanbaxyo iyo kacdoon ay ka dhaceen dalka Masar.
Hase yeeshee July 2013 ayaa hogaamiyihii ururka Akhwaanul Muslimiin afgambi milatari xukunka loogaga tuuray kadib markii banaanbaxyo rabshado wata oo loogaga soo horjeeday ay ka dhaceen dalka Masar.
Morsi waxaa hore loogu xukumay dil eedeymo la xiriira dil halka ururka uu hogaamiyaha ka ahaana loo aqoonsaday inuu yahay urur argagaxiso lagana mamnuucay wadanka Masar. Waxa uu ka soo muuqday maanta maxkamada la horkeenay isagoo xiran dhar guduudan oo ah dareeska lagu yaqaan maxaabiista dil sugayaasha ah.